Yaa leh Mas'uuliyadda Dilkii Madaxweyne Sharmaarke? | KEYDMEDIA ONLINE
Laakiin hadday ay noqon weydo in marka hore laga hortago sababkasta oo ay ku timaado, waxay qaadanaysaa in la hakiyo wakhti jiilal kala duwan ay marto, oo la heli waayo dawadeeda wakhti kooban. Waxayna dhalisa in wax yaabo badan oo aysan bulshada horay u aqoon jirin, musiibooyin ama waxyaabo nolosha caadiga ah ee ummadaha ay lahaayeen dhaawacda, ama badasha.
Dilka madaxweynaha oo rasaasta lagu dhuftay lala hor istaagay marka la dilay wuxuu ahaa shirqool aad moodaysay in loogu tala galay oo u dhacay si karaamo darra ah, waxayna ahayd dil arxan daran oo uu gaystay askari illaalada gaarka ah ee uu leeyahaa madaxweynaha ayna hayb ahaan wadaageen, Meelaha qaarkood waxaa lagu sheegayaa in Madaxweynaha loo dilay AANO QABIIL, sida aad ka heleyso xitaa Wikipedia lagu qoray dilka Madaxweyna Sharmarke.
CABDUQADIR CABDI MAXAMED oo 22 jir Police ah laguna xoojiyey Illaalada madaxweynaha ayaa geystay dilka (Source “Puntite”), kaasoo ka nixiyey dhamaan ciidamada. Dilka madaxweynaha Soomaaliya waxaa ka horeeyey sirdilyo fashilantay oo Madaxweyne Cabdirashiid Cali Sharmarka lagu qaaday, ayadoo lagu weeraray Bambo gacmeed agagaarka Garoonka diyaaradaha Magaalada Muqdishu sanadii 1968, asagoo markaas ka soo noqday Garoonka.
Mu’aamaradaas madaxweynaha ee hore ayaa digniin waxay u ahayd inuu madaxweynuhu ku dhex jiro calaamad cas oo noloshiisana ay halis ku jirto, laakiin madaxweynaha waxkastaba waxa ugu weynaa wax qabadka ummadda soomaaliyeed ee dhibku gaaray intuu illaalin lahaa noloshiisa, wax lagu fekerayeyna maahayn in nin ay qaraabo yihiin kana mid ahaa illaaladiisa gaarka ah uu toogan karo madaxweyne uu dal dhan leeyahay.
Baarlamaanka buuqa ka dhex jiray, Beryahaas waxaa lagu eedeynayey dhibka ugu badan inay wadeen kooxo ka socday Puntland oo doonayey in ay dalka madaxweyne ka noqdaan sida muuqanaysay oo dad badan oo berrigaas joogay ay kuu sheegayaan In Xaaji Muuse Boqor ka mid ahaa, buuqa ugu badana ay ayagu lahaayeen.
Cabduqaadir Oromo buugaagta uu qoray oo inta badan ay ka caroodaan reer puntland, oo aan la garanayn sababta ay u diidan yihiin buugaagtiisa ayaa ku sifeeyey hana qaadkii dowliga ahaa ee soomaaliyeedba inay ahaayeen mushkiladda soomaaliya, oo ayna ka shaqeyn wax wanaag ah marka laga soo tago dhowr qofood oo ka tirsanaa SYL oo wax tarkoodu ummadda ka dhex muuqday kuwaasoo aan qabiil iyo hayb gooni cidna ku raacin sharaf iyo maamuus lahaa.
Bogga Keydmedia Online kala soco Qeybta labaad ee Qormaddaan.